आधिकारिक विकासकर्ता देखि लाइसेन्स भनिन्छ कफी कुञ्जीहरू, जो 45 दिन सम्म रहन्छ कार्यालय सर्तहरू। तर activators आफूलाई बीचमा फरक हुन सक्छ धेरै यस्ता समाधान गर्दै छन्। प्रमुख चयन गर्न अघि बढ्नु अघि सर्वश्रेष्ठ एक विशेष परिस्थितिको उपयुक्त छ जो समाधान निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ आधारभूत प्रावधान थाह हुनुपर्छ किन, छ। कफी कुञ्जीहरू "Kaspersky" सजिलो डाउनलोड, तर तपाईं मन को विकल्प आउन आवश्यक छ। यो गर्न, भौतिक जाँच गर्न निश्चित हुन।
म एक कफी प्रमुख किन चाहिन्छ? कुञ्जीहरूको विशेष गरी प्रयोग: "Kaspersky" (2014)
आज, सफ्टवेयर विक्रेताहरु शब्द एक साधारण संज्ञा रूपमा "कफी कुञ्जी" प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै विकासकर्ताहरूको लागि, यो संभावित खरीदारों आफ्नो उत्पादन हो खरीद प्राप्त गर्न एक तरिका हो। सुरुमा तिनीहरूले आफ्नो सफ्टवेयर छ स्थापना गर्न ग्राहकहरु लोभ्याउन गर्न प्रयास गर्दै छन्, एक "" मुक्त लाइसेन्स भेटी। निस्सन्देह, यी कुञ्जीहरू को अस्थायी प्रयोग दृश्य को बिन्दु खरिद गर्नु अघि सफ्टवेयर परीक्षण गर्न एक उत्कृष्ट मौका प्रदान गर्नुहोस्। कफी कुञ्जीहरू "Kaspersky" यस्तो उद्देश्य लागि सिर्जना गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो फाइदा तपाईं कानुनी रूपमा सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्ने छ। प्रतिबन्ध सीमित पहुँच अवधि छ। प्रायजसो, यो एक महिना छ, तर धेरै निर्माताहरु पदोन्नति, र अन्य समाधान पेशकश गर्दै छन्। कहिलेकाहीं धेरै लोभ्याउने। एन्टिभाइरस "Kaspersky" - आज सर्वाधिक लोकप्रिय प्रस्ताव को एक।
प्रकार पत्रिका कुञ्जीहरू
कफी कुञ्जी प्रयोग गर्न निर्णय गर्नु अघि, तपाईं "फाइदा" र वजन गर्नुपर्छ "बुरा।" त्यसैले, एक वर्षको लागि विरोधी-भाइरस प्रयोग औसत लागत बारे 1,000 rubles छ। केही विकासकर्ताहरूले थप अनुकूल (वा विपरित) समाधान प्रस्ताव। हामी यो आंकडा देखि अगाडि बढ्न भने, हामी सजिलै एक महिना मा विरोधी-भाइरस प्रयोग लागत बारे 90 rubles छ कि गणना गर्न सक्छन्। यस्तो योगफल र प्रयोगकर्ताको लागि भरोसा एक ग्यारेन्टी प्राप्त छ, तर आर्थिक अझै बाहिर चलिरहेको छ भने तपाईँले एक कफी प्रमुख स्थापना बारेमा विचार गर्नुपर्छ।
क्षणमा हामी विरोधी-भाइरस सफ्टवेयर सक्रिय गर्न तीन तरिका थाहा
यो प्रविधी जस्तै:
- लाइसेन्स को अधिग्रहण;
- अस्थायी सक्रियता प्रमुख लग प्रयोग;
- अवैध कुञ्जीहरू प्रयोग संग कार्यक्रम को अद्यावधिक।
निस्सन्देह, प्रत्येक प्रयोगकर्ता छनौट गर्ने अधिकार छ। यद्यपि, यो कडा अवैध केही स्रोतहरू प्रस्ताव कुञ्जीहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन। यो धेरै कारक कारण हो। त्यहाँ विरोधी-भाइरस सफ्टवेयर महत्वपूर्ण क्षणमा परित्याग छैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। कुनै एक ग्यारेन्टी दिन सक्छन् र ह्याक सफ्टवेयर प्रणाली हानी छैन। निस्सन्देह, यो अन्य मिसिन मा साँचाहरू जाँच गर्न सम्भव छ, तर पहिले यसलाई पाइन्छ उपयुक्त विकल्प दुष्ट धेरै प्रणाली हुन सक्छ। खेल बस छैन यो लायक छ।
कसरी लामो कफी प्रमुख कार्यहरु? "Kaspersky" (एन्टिभाइरस): debunking दन्त्यकथा
यो सफ्टवेयर सन्दर्भमा अनुमान धेरै छ। हामी धेरै कफी कुञ्जीहरू "Kaspersky" सक्षम धेरै वर्ष को लागि काम गर्न भनेर जानकारी विश्वास गर्नु हुँदैन। पहिले, काम अवधिको प्रणाली समय को राशि हुँदैन। हरेक वर्ष, ओएस अद्यावधिक हुनु पर्दछ। यो मेशिन कायम गर्न मद्दत गर्छ। निकै पुरानो सिस्टम सधैं नराम्ररी, कुनै कुरा सफ्टवेयर स्थापना गरिएको थियो के काम हुनेछ।
जहाँसम्म विरोधी-भाइरस रूपमा, लग प्रमुख को वैधता को अवधि एक महिना (वा अवधि निर्माता द्वारा निर्दिष्ट) भन्दा बढी पछिल्लो गर्दैन। कुनै चर्किएको परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ।
लाइसेन्स प्रमुख को वैधता - दुई वर्ष भन्दा कुनै थप। अन्य कुनै निर्माता यो आंकडा अधिक इजाजतपत्र उत्पादन गर्छ। कफी कुञ्जीहरू "Kaspersky" कुनै अपवाद छ।
कसरी एउटा फोल्डर मा एक पासवर्ड सेट गर्न
कफी greats बारेमा उद्धरण
उपनगरहरुमा राम्रो माछा मार्ने: नि: शुल्क र खर्च समयको लागि productively
एक पेन्सिल संग नाक कसरी आकर्षित गर्न?
स्पाइनल र epidural (epidural) एनेस्थेसिया - के फरक छ? प्रयोग, contraindications, सम्भव जटिलताहरू
कसरी Applejack उदाहरण द्वारा पेन्सिल मा "Equestria" बाट बालिका आकर्षित गर्न। चरण ट्युटोरियल द्वारा चरण
सबै भन्दा राम्रो हरर 2013